Yini okufanele ibe kwabantu ibhethri? Indlela hlola ukuminyana ibhethri? Indlela ukwandisa kwabantu of ibhethri?
abanikazi abaningi imoto cishe kwakudingeka ukubhekana nale nkinga ibhethri ayilungile. Kuqondane nokuthi imoto wema usuku lonke bese uqale ngalesosikhathi it phathelana engenakwenzeka. Nokho, ngisho nokunwetshiwe ukushaja ibhethri akusizi. Lezi izimpawu zibonisa ukuncipha kwabantu electrolyte. Yini okufanele ibe kwabantu ibhethri, kungani uwe, indlela yokukhulisa kuleveli lilungile, nathi ngazo kulesi sihloko.
Electrolyte kanye kwabantu bayo
Electrolyte - isixazululo sakhiwa sulfuric acid futhi amanzi distilled. Lezi zingxenye eziqukethwe izingxenye okungenani zilingana: amanzi - 1 okuyingxenye sulfuric acid - izingxenye 1.25. Figure 1.25 - lena ukuminyana imoto ibhethri. izakhiwo okusebenza kwe-yebhethri ngqo kuncike kule Inkomba - ayanda kunjalo,
ephansi kwezinga-qhwa kwakhe, yena isesimweni esihle sokusebenza. Ukwazi lokho kufanele kube kwabantu ibhethri, kungenzeka ukuba yahlulele ukuthi sinjani ngempela isimo idivayisi yakho.
Yokukala kwabantu ibhethri
Ngaphambi hlola ukuminyana ibhethri, kubalulekile ukuthola idivayisi elikhethekile okuthiwa i hydrometer. Kuyinto idivayisi kwala maphuzu ambalwa iraba kanye namabhodlela.
ngoba i-electrolyte siyingozi chemical kwakwakhe phambi yokulinganisa kwabantu bayo kuyadingeka ukuze banakekele babeqaphile, okungukuthi ukuba sifeze umsebenzi amagilavu iraba ukugwema ukuthintana ketshezi isikhumba izingubo. Ukubhema akuvunyelwe nhlobo!
Vula itjhubhu amabhange, ufaka ichopho kudivayisi nangenhliziyo Blower uhlobo kancane electrolyte ukuze iflothi hydrometer bentanta ngokukhululekile izindlu ngaphandle kokuthinta phansi, ohlangothini izindonga phezulu. Linda kuze kube yilapho uketshezi kule divayisi ngeke ukuzola, futhi ubambe ke nehlo, ongaboni thatha ukufunda. Yenza le nqubo ngawo wonke amabhange. Uma umehluko kwabantu mkhulu kunezinhliziyo 0.01 amagremu ngasinye cubic. cm, kuyadingeka ukuze ungeze amanzi distilled noma ukubeka ibattery litshaja yokululama. Ngokunciphisa kwabantu kuya ukubaluleka 1.24 g cc ngayinye. cm noma ashona ibhethri kufanele libe lincane.
Kubalulekile ukwazi ukuthi indlela ukuhlola kwabantu ibhethri usebenzisa hydrometer,
kodwa futhi imithetho ukuchibiyela inkomba ithuluzi ezimweni lokushisa ethize. I elikhulu electrolyte lokushisa ukukala kwabantu salo +15 - + 25 ° C, kodwa uma kunesidingo ukuze sifeze lesi inqubo ngesikhathi iphansi noma iphezulu ukufundwa lokushisa ukuthi kumele ilungiswe.
Amazinga electrolyte (? C)
Ukulungiswa kuya hydrometer
Akufanele uthole ukuthi yini kwabantu ibhethri ngemuva lapho muva nje
Amanzi isipikili, noma ngemuva kwemizamo ukuqala ukuziqalela okuphindaphindiwe. Ngemuva kokuqeda zonke izinqubo kahle hashaza ngamanzi hydrometer.
Indlela ukwandisa kwabantu of ibhethri?
Indlela elula wokuqhubeka ledzingekako electrolyte ku ibhethri isipikili up ngamanzi distilled. Nokho, iningi abanikazi imoto ukhohlwe noma abazi ukuthi ngezikhathi ezithile kuyadingeka ukukala kwabantu ibhethri, ngoba amanzi amathumba away nge sikhathi, futhi nalo electrolyte, elibangela ukuminyana ukunciphisa, ngezinye izikhathi kuze iphuzu ezibucayi. Lapho ibhethri ngokuphelele
Yena ongafuni ukusebenza ke kukhona umbuzo evutha: "? Kanjani ukwandisa kwabantu of ibhethri"
Ukusebenzisa imiyalelo ngezansi, uyokwazi ukuba bandise nokuphila ibhethri. Nokho, khumbula ukuthi le nqubo kudinga ukunakekelwa okukhethekile futhi ukunakekelwa.
• Cikelela ngokuqapha esiphezulu lapho esebenza electrolyte: Zonke izenzo lwenziwa izibuko zokuzivikela futhi amagilavu zenjoloba.
• Nge self-dilution we electrolyte qiniseka engeza asidi emanzini, kodwa hhayi ngendlela efanayo! Lezi uketshezi babe nokuminyanisa ezahlukene, futhi umphumela nephutha kungaba ukusha sina.
• ibhethri okunqatshelwe ujike sibheke phansi kusukela Ngakho esebenzayo ebusweni amapuleti kungase ikhasi off futhi abangele isekhethi iDemo.
• Zilungiselele ukunikela amandla sokukhipha electrolyte ubudala futhi ulungiselele nenye entsha.
• Oku-uhlole impahla plastic ukuze usetshenziselwe uphawu imigodi ukumelana electrolyte.
• Khumbula ukuthi ngebhethri kuyodingeka kwabantu ephakeme.
Ukuze ukukhulisa kwabantu ibhethri electrolyte kuzodinga:
• yokulinganisa umthamo;
• nokunamathisela ngomthofu yensimbi;
• acid yebhethri;
• amanzi distilled.
Indlela ukukhulisa kwabantu electrolyte e ibhethri: imiyalelo enemininingwane
We khiqiza yizilinganiso ukuminyana electrolyte e lomfula. Unalokho engqondweni, yini okufanele kube
kwabantu ibhethri, qhathanisa ukusebenza yabo yangempela. Ngakho, uma konga 1.25-1.28, kanye nokusakazeka komkhuba wokuthanda izinto e lomfula akuyona ezingaphezu kuka 0.01, ibhethri isebenza kahle, futhi noma yiziphi izinqubo-ke akudingekile. Uma nemingcele ziyahlukahluka 1,18-1,20, VO yayiyobizwa amanye nge electrolyte ukuminyana 1.27.
• Kusukela omunye ebhange kuphunywe nge enemas ubudala ipheya esiphezulu inani electrolyte balinganise umthamo yayo.
• Gcwalisa isixazululo fresh isamba uhhafu we walulama.
• abasebenzayo, kodwa ngesisa nithintithe ibhethri ukuxuba ketshezi.
• Izinyathelo kwabantu. Uma kungenjalo kangaka, yini okufanele kwabantu acid yebhethri, ukwengeza enye ½ of lemali esele okuvela kuyo le electrolyte. Ukusebenza kufanele liphindwe uze uthole ukusebenza oyifunayo.
• engeza ezisalayo amanzi distilled.
Okufanele ukwenze nge ezibucayi ukuminyana ezingeni
Uma kwabantu ngaphansana 1.18 ke inkinga isixazululekile uphole up electrolyte ngeke zisebenze. Kulokhu, i-asidi ibhethri okuyinto edingekayo kokuba kwabantu kakhulu okukhulu. Le nqubo wenziwa ngendlela efanayo Isikimu electrolyte kwalokho. Uma ngesinye isikhathi akazange athole imiphumela oyifunayo, uphinda izinkathi ozidingayo.
Uma kwabantu acid yebhethri ngisho ngezansi 1.18, kubalulekile iphendukele inqubo ephelele electrolyte esikhundleni. Ngenxa yale njongo kubalulekile ukumpompa masinyane ngenani Blower esiphezulu yesixazululo. Khona-ke, loMfula elishajekayo hermetically ukuvala Imigudu ukuzwakalisa imbobo. Beka ibhethri ngakolunye uhlangothi kanti ujike sokuprakthiza izimbobo 3-3.5-mm phansi ngayinye amathini. Ngaphambi prodelyvat enye imbobo kusukela odlule abakhwabanisi electrolyte ezilinganisweni.
Ngokulandelayo, kahle uxubha ibhethri ngamanzi distilled. Ngemva kwalokho, solder bores plastic acid (isib lokhu kungasetshenziswa nge Imigudu ibhethri ezingadingekile).
Senifeze konke nezinqubo ukulungiselela, ungaqala fresh electrolyte ukugcwaliswa. Kulokhu, sebenzisa isixazululo okulungiselelwe ngokuzimela, kwabantu okuyinto kancane kunakunoma kuhlinzekelwe lakho zone sezulu. Kulokhu, kufanele kuphawulwe ukuthi ngisho esikhundleni ephelele electrolyte e ibhethri isindala ngeke sikwazi ukunikeza impilo inkonzo efanayo e ibhethri elisha.
Ithiphu: Uma ufuna ibhethri lakho wakhonza isikhathi eside ngangokunokwenzeka, ungakhohlwa ukushaja ke ngesikhathi futhi ngezikhathi ezithile uhlole kwabantu bayo.
Canon IXUS 155 ikhamera: Izibuyekezo yokuthi kunezigidi zabasebenzisi kanye izici eziyinhloko
Tours ngoMashi - ulungele uhambo basilibale!
Marie Dorin aber Mari: Biography emfushane futhi impumelelo
Kanjani ukuthuthukisa-X-ray umbono?
IzAga ngomuntu - incazelo yabo ezijulile futhi ezihlukahlukene
Russian Spaniel - engumngane ephelele ku ekuzingeleni futhi ekhaya